အိမ်လုပ် Blueberry Pie - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ခရမ်းချဉ်သီး parmesan နှင့်အတူအစေခံရန်အဘယျအသားကို
အဘယ်အရာကို entree butternut squash ဟင်းချိုနှင့်အတူကောင်းစွာသွားသည်
အိမ်လုပ် Blueberry Pie
ဘလူးဘယ်ရီ Pie မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာမှဆင်းသက်လာခဲ့သည့်ဂန္အချိုပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ချိုမြိန်သောအဆာအတွက် luscious ဘလူးဘယ်ရီနူးညံ့, flaky ပိုင်မုန့်စိမ်းထဲမှာဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်ရွှေအညိုရောင်နှင့် bubbly သည်အထိမုန့်ဖုတ်နေကြသည်။
ငါလွယ်ကူသောနှင့်အရသာကနေ Berry ဟာအချိုပွဲအားလုံးကိုချစ်ကြတယ် ဘလူးဘယ်ရီ Cobbler ငါတို့အကြိုက်ဆုံးရန် ဘလူးဘယ်ရီ Buckle နှင့်ဤဘလူးဘယ်ရီပိုင်ကျိန်းသေစာရင်းထိပ်ဆုံး! ကျနော်တို့ကဒီ la mode ကိုအစေခံရန်ကြိုက်တယ်။
ဘလူးဘယ်ရီ Pie သည်အရသာရှိပြီးလွယ်ကူသည်။ ပန်းသီး ။
သစ်သီးဝလံ pies များအတွက် Pie အပေါ်ယံလွှာ
သငျသညျ pre- လုပ်အေးစက်နေတဲ့ပိုင်အပေါ်ယံလွှာကိုသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်၏ဒေသခံစတိုးဆိုင်၏ရေခဲသေတ္တာအပိုင်းမှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သူတို့ကခြစ်ရာနှင့်အတော်လေးနှိုင်းယှဉ်အရသာနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်! သငျသညျအကြှနျုပျ၏လွယ်ကူသောအတွက်ကဲ့သို့တစ် ဦး အစအန topping ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင် Apple Crumb Pie သင်သည်အပေါ်ယံလွှာကိုအပေါ်ယံလွှာဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။
မကြာခဏပေါင်မုန့်ကိုဖုတ်သောအခါပြင်အပေါ်ယံလွှာသည်အလျင်အမြန်ညိုနိုင်သည်။ အပေါ်ယံလွှာ၏အပြင်ဘက်အနားများကိုအညိုရောင်မဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားရန်ရိုးရှင်းပါသည် ပိုင်ဒိုင်းလွှား ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သဖြင့်အနားများကိုသတ္တုပါးဖြင့်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။
ကြက်သားနှင့်ခေါက်ဆွဲအစရှိသော crock အိုး reames
Frozen Blueberries နှင့် Blueberry Pie လုပ်နည်း
ငါရိုးသားဖို့, ဒီပိုင်၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအများကြီးရှိပါတယ် လတ်ဆတ်တဲ့ဘလူးဘယ်ရီနှင့်အတူပိုကောင်း ။ လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများသည်ပိုကောင်းသော်လည်း၊ သူတို့သည်အမြဲတမ်းမရရှိနိုင်ပါ (သို့မဟုတ်အရူးများစွာဖြစ်နိုင်သည်) ကိုသိသည်။ ထို့ကြောင့်အေးခဲသည့်လများအတွင်းအေးခဲသွားနိုင်သည်။
သင်သည်ပထမသီးသောအသီးများကိုဖျက်သိမ်းရန်မလိုအပ်ပါ (သို့သော်ချက်ပြုတ်ချိန်မိနစ်အနည်းငယ်ထည့်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်) ။
အနည်းဆုံးဇွန်း ၁ ခွန်းအသီးပြောင်းသီးကို blueberry အရောအနှောထည့်ပါ။
အေးခဲနေသောဘလူးဘယ်ရီသည်တစ်ခါတစ်ရံပိုသောညံ့ဖျင်းသောအချဉ်သီးတစ်မျိုးအတွက်အပိုအရည်အနည်းငယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နွေးထွေးသောစက်ဝိုင်းမတပ်ဆင်ထားသဖြင့်၎င်းကိုထားရန်နှင့်အအေးခံရန်အချိန်များစွာခွင့်ပြုပါ။ ပြီးတာနဲ့လုံးဝအအေးနှင့်သတ်မှတ်ထား, သင်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဘို့ပိုင်နည်းနည်းအပူပေးနိုင်ပါသည်။
Blueberry Pie ပြုလုပ်နည်း
သင်၏အောက်ခြေအပေါ်ယံလွှာနှင့်အတူ pie ပန်းကန်တန်း။ berry သီးအရောအနှောနှင့်ဖြည့်ပါ။
သင်၏ဒုတိယပိုင်အပေါ်ယံလွှာကိုလှိမ့်ထုတ်ပြီး ၁″ တစ်ချပ်ခွဲပါ။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအပေါ်ယံလွှာကိုဖန်တီးရန်အချပ်များကိုစက်ဝိုင်းပုံပေါ်၌ရက်ထားပါ။ ( Lattice Crust ပြုလုပ်နည်း ) ။
အဆိုပါဘလူးဘယ်ရီပိုင်အဆာပူဖောင်းစတင်သောအခါ, သင်သည်သင်၏ပိုင်နီးပါးပြီးပြီကြောင်းကိုငါသိ၏။ အပေါ်ယံလွှာရွှေသည်အထိချက်ပြုတ်ရန်ခွင့်ပြု!
မင်းရဲ့ Blueberry Pie ဟာပြီးပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင် အချိန်အအေးခံခြင်းနှင့်ထားရန်သေချာပါစေ ။ ဒီအဆင့်ကိုကျော်သွားလိုက်ရင်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ပိုင်၏တစ် ဦး ကperfectlyုံတင်ပြအပိုင်းအစ!
ငါ gyro သားညှပ်ပေါင်မုဘယ်မှာရနိုင်
သံပုရာ Meringue Pie - ချိုမြိန် & tart ။
Apple Pie စာရွက် - လွယ်ကူသောစုံလင်ခြင်း။
လွယ်ကူသော Pecan Pie စာရွက် - အကြိုက်ဆုံးကျပါ!
Sweet Potato Pie - ဂန္ထဝင်သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။
ဖရုံသီး Pie စာရွက် - ကျေးဇူးတုံ့ပြန်အဓိက။
ပြင်ဆင်ချိန်၂၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်လေး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၈ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson ချိုမြိန်သောသံပုရာအနမ်း blueberry အဆာနှင့်ပြည့်စုံနူးညံ့သော flaky ပိုင်အပေါ်ယံလွှာ။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ စာရွက်9'နှစ်ဆပိုင်အပေါ်ယံလွှာ
▢¾ ခွက် သကြားဖြူ
▢၅ ဇွန်း ပြောင်းဖူး
▢၁ သံပယိုသီး zested & အရည်ရွှမ်း
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မြေပြင်သစ်ကြံပိုးခေါက်
▢၅ ခွက် လတ်ဆတ်သောဘလူးဘယ်ရီ
▢နှစ် ဇွန်း နို့ ဒါမှမဟုတ်ထောပတ်
400 ° F မှမီးဖို Preheat Zest သံပုရာ။
ပန်းကန်လုံးသေးသေးလေးထဲ၌သကြား၊ ပြောင်းဖူးမှုန့်၊ သံပုရာရည်ဇွန်း၊ ၁ ခွန်းဇွန်းသံပုရာဖျော်ရည်၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်နှင့်ဆားအပိုများကိုရောထွေးပါ။ blueberries ထဲသို့ Add ညင်ညင်သာသာပေါင်းစပ်ဖို့နှိုးဆော်။
ကျန်ရှိနေသောအပေါ်ယံလွှာနှင့်အတူထိပ်တန်းနှင့်ရေနွေးငွေ့မှလွတ်မြောက်ရန်ခွင့်ပြုရန်အပေါ်ယံလွှာတွင် 4-5 အလျားလိုက်အပေါက်ကိုဖြတ်။ ပိုမိုနှစ်သက်ပါက တစ်ရာဇမတ်ကွက်အပေါ်ယံလွှာကိုဖန်တီးပါ အပေါ်ဆုံးအပေါ်ယံလွှာကို ၁ 'စင်းများထဲသို့ဖြတ်ပြီး၎င်းတို့ကိုပတ်ချည်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အပေါ်ယံလွှာကိုနို့နှင့်စုတ်ပါ။
မည်သည့် dripping ကိုဖမ်းရန်ဒယ်အိုးပေါ်တွင်ပိုင်ကိုချထားပါ။ အနိမ့်ဆုံးမီးဖို၏စင်ပေါ်တွင်ပိုင်ရှင်သည်မိနစ် ၄၅ မှ ၅၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ဖြည့်ပါ။ သို့မဟုတ်အသားဖြူသည်ရွှေရောင်ဖြစ်နေသည်။
အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုမီအနည်းဆုံး2နာရီအေး။
သော့ချက်စာလုံးဘလူးဘယ်ရီပိုင် သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။